Dec 07, 2017Comments Off on စာသင်သားများအတွက် လုပ်ငန်းသုံးအင်္ဂလိပ်စာ1369
Marketing, Advertising and Sales-3 (ဈေးကွက်ရှာခြင်း၊ ကြော်ငြာခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း-၃)
ဈေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံစည်းမျဉ်းများ၊ နည်းပရိယာယ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လေ့လာရာတွင် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် အသုံးပြုပြောဆိုလေ့ရှိသော စကားရပ်များ၊ ပုဒ်စုများအနက် အများဆုံးဖြစ်နေသည့် စကားရပ်အချို့ကိုလည်း ယှဉ်တွဲလေ့လာ ကြရမည်ဖြစ်သည်။
Product Portfolio – ကုန်ပစ္စည်းအစုစု သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိစ္စ အဝဝ
Our company is showing new product portfolio in IT Exhibition.
အိုင်တီပြပွဲတွင် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကို ပြသထားသည်။
Product launch – ကုန်ပစ္စည်းစတင်ရောင်းချခြင်း
Our company invilid to all of media for your product launching party.
ကျွန်တော်တို့၏ ကုန်ပစ္စည်းစတင်ရောင်းချပွဲအတွက် မီဒီယာအားလုံးကို ဖိတ်ကြားခဲ့သည်။
Premium product – ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်သော ကုန်ပစ္စည်း
Apple iPhone is one of kinds of premium product.
အယ်ပဲအိုင်ဖုန်းသည် ဈေးကြီးမြင့်သောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
Packing – တပေါင်းတစည်း အစုံလိုက်တွဲရောင်းချသောအစီအစဉ်
The marketing department will specify the type of packing that will appeal to perspective customers.
ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများကို စိတ်ပါလာစေမည့် အစုံလိုက်တွဲရောင်းချမည့်ပုံစံကို ဈေးကွက်ဌာနမှ အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးပါမည်။
Branding – ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မိတ်ဆက်ခြင်း
Decisions about branding affect your investment in pro-motion and packaging.
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မိတ်ဆက်၍ အမည်ဖောက်ပေးခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း အစုံလိုက်ရောင်းချမှ ရင်းနှီးသူမှရရှိ
Pricing policy- ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းမူဝါဒ
A company needs to consider its long-term and short-term pricing policy.
ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ရေတိုရေရှည်အတွက် ဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းမူဝါဒကို စဉ်းစားထားရန် လိုအပ်သည်။
Markup – ဈေးတင်ခြင်း၊ အမြတ်တင်ခြင်း
A forty percent markup was recommended by the wholesaler.
၄၀ % ဈေးတင်ခြင်းကို လက်ကားအရောင်းသမားများက ထောက်ခံကြသည်။
Discount pricing – ဈေးနှုန်းလျှော့ချခြင်း
A large volume of sale is needed to make discount or discount pricing.
များများဝယ်ယူမှုအတွက် ဈေးနှုန်းလျှော့ချခြင်းပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
Wholesale – လက်ကားရောင်းချခြင်း
The wholesale market is depending on network.
Retail – လက်လီရောင်းချခြင်း
Wholesale price is cheaper than retail price.
Sale force – ဈေးရောင်းအဖွဲ့
Each member of sale force is responsible for two or three products.
ဈေးရောင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းသည် ကုန်ပစ္စည်းနှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးကို တာဝန်ယူရောင်းချရသည်။
Advertising – ကြော်ငြာခြင်း
We decided to increase the advertising budget by twenty percent.
ကြော်ငြာရန်ပုံငွေကို ၂၀ % တိုးမြှင့်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်။
Public- relation (PR) – ကုမ္ပဏီပုံရိပ်များကို အများသိစေရန်ပြုလုပ်ခြင်း
We are organizingabig PR event to company the lunch of our new product.
ကုန်ပစ္စည်းသစ် စတင်ရောင်းချခြင်း လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ကုမ္ပဏီပုံရိပ်များ သိစေမည့် ပုံကြီးတစ်ခုကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါသည်။
ဈေးကွက်မန်နေဂျာများအနေဖြင့် ဈေးကွက်အတွင်း မိမိကုန်ပစ္စည်း သွက်လက်စွာရောင်းချနိုင်ရေး မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို သိရှိနိုင်ရန်
သတင်းအချက်များကို အသေးစိတ်လေ့လာကြရသည်။ လေ့လာစုံစမ်းရာတွင် မတူညီသောနည်းလမ်းများစွာ ရှိသော်လည်း ဈေးကွက်သုတေသန (Market reach) ဟု ခြုံငုံပြောဆိုသတ်မှတ်ကြသည်။
ယေဘုယျသဘောအရ အရည်အသွေးဆိုင်ရာ (Qualitative) နှင့် အရေအတွက်အရ (Quantitative) အချက်အလက်များကို အခြေခံ
လေ့လာကြရမည်ဖြစ်သည်။ အခြေခံလေ့လာမှုကိုဆောင်ရွက်ကြသောအခါတွင် အောက်ပါနည်းလမ်းပုံစံများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
(၁) Awareness – ဈေးကွက်ကို နိုးကြားသိရှိနားလည်ခြင်း
(၂) Targeting – အမြင့်ဆုံးရောင်းအားကို ဈေးကွက်အလိုက်သိထားခြင်း
(၃) Acquisition – ဈေးကွက်အတွင်း မိမိရောင်းချမည့် ပစ္စည်းဝယ်လိုအားနှင့် ရောင်းအားပွင့်စေမည့် ဈေးနှုန်းသတင်းများ စုဆောင်းခြင်း
(၄) Retention – ဝယ်ယူသူများကိုထပ်မံဝယ်စေရန် ထိန်းချုပ်ယူခြင်း
ပထမဆုံး Awareness တွင် နိုးကြားသိရှိနားလည်နိုင်ရေးဆိုင်ရာတွင် မည်သည့်အတွက် ဝယ်ယူကြဆိုသော အချက်များနှင့် မည်သို့ကြောင့် ဝယ်ယူကြသည်ဆိုသော အချက်များပါဝင်သည်။ လူအများနှင့် ဆက်နွှယ်မှုရယူကာ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းယူနိုင်သည်။ ကြော်ငြာခြင်းအားဖြင့် ထိရောက်မှုရှိ၊ မရှိလေ့လာခြင်းဖြင့်လည်း ရနိုင်သည်။
Targeting နှင့်ပတ်သက်၍ ဈေးကွက်အနေအထား ပိုင်းခြားရယူမှုကို မည်မျှရရှိထားသည်ကို သိရှိနိုင်ရန်စုံစမ်းခြင်းနှင့် မိမိကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ်အပေါ် မည်မျှသိရှိကြပြီး မိမိရောင်းချသော ပစ္စည်းအမျိုးအစားအမည်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်များကို လက်ခံနှစ်သက် ထားကြသောအဆင့်ကို သိရှိကြရပါမည်။ ဤနေရာတွင် ကုန်ပစ္စည်းတူ အရည်အချင်းတူ များကိုနှိုင်းယှဉ်၍ ရရှိသောအချက်များ အဓိက ပါဝင်စေရမည်။
Acquisition နှင့်ပတ်သက်၍ မိမိကုန်ပစ္စည်းများအပေါ် ရှုမြင်ထားကြသည့် အယူအဆနှင့် ကုန်ပစ္စည်းတူ၊ အရည်အချင်းတူ ပစ္စည်းများအပေါ် ရှုမြင်ထားချက်များကို လေ့လာကြရမည်ဖြစ်သည်။ အဝယ်လိုက်ခြင်း၊ ရောင်းအားပွင့်ခြင်း ရှိနေသော ဈေးနှုန်းများနှင့် အမျိုးအစား အရည်အချင်းများကို အဓိကပါဝင်စေသည့် သိရှိနားလည်မှုဖြစ်သည်။
Retention နည်းလမ်းပုံစံတွင် ဝယ်ယူအသုံးပြုသူများ မိမိကုန်ပစ္စည်းအပေါ် ကျေနပ်အားရမှု ရှိ၊ မရှိနှင့် စွဲလမ်းနှစ်သက်မှု မည်မျှရှိသည်ကို စစ်တမ်းကောက်ယူ ရသည်။ မိမိတို့ကုန်ပစ္စည်း သတင်းပျံ့နှံ့မှု မည်မျှအတိုင်းအတာ ရှိသည်ကိုလေ့လာ ရမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ မည်သို့သောနေရာတွင် အံဝင်ခွင်ကျ အသုံးဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်းတို့ကို စုံစမ်းယူရသည်။
ဈေးကွက်သုတေသန လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြရာတွင် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုများအပြင် အသုံးပြုသူများဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လက်လီရောင်းချပေးသော ဆိုင်များဖြင့်သော်လည်းကောင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမှုများကို လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သည်။ တယ်လီဖုန်း ဆက်သွယ်မှုဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာပေးပို့လက်ခံခြင်းအတွက် စာတိုက်မှဖြစ်စေ၊ အင်တာနက်ကို အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ စုံစမ်းရယူနိုင်ပါသေးသည်။ အကောင်းဆုံးနှင့် အထိရောက်ဆုံး နည်းလမ်းမှာ ပြိုင်ဘက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဈေးကွက်စိုးမိုးနိုင်အားနှင့် ဈေးကွက်ဖန်ဆင်းမှု အစီအမံများကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
(ရှေ့အပတ် Marketing, Advertising and Sales-4 ကိုဖော်ပြပေးပါမည်။)
Previous PostEnglish Myanmar Translator
Next PostTop Folder Pro (iOS)